Miyuu ku xadgudbay Amniga Koontadayda barta Twitter-ka? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Isticmaalaha Twitter-ka ayaa hubin kara haddii Amniga uu leeyahay Koontada waa la jabiyay, markaad ilaalineyso waxyaabaha soo socda: Waxaad arkeysaa Tweets iska soo daba dhacay oo koontadaada lagu dhajiyay, waxaad ogaaneysaa Farriimo Toos ah oo aan la sii qorsheyn oo laga soo diray Koontadaada.
Isticmaalaha waxqabadyo lagu sameeyay Koontadaada: Sida loo raaco, loo raaco, loo xannibo, iwm; waxaad ka heleysaa ogeysiisyo ka socda Twitter oo sheegaya in Amniga Account-kaaga la jabin karo, in macluumaadka Akoonkaaga uu is beddelay oo uusan ahayn kii beddelay.
Isticmaaluhu wuu ogsoon yahay inuu lambarka sirta ah ma sii shaqeynayo iyo, barxadda Twitter-ka, waxay kaa codsaneysaa inaad dib u soo celiso. Dareenkan, Isticmaaluhu wuxuu ubaahan yahay habab Twitter ah si dib loogu buuxiyo Akoonkiisa oo loo sugo.
Talaabooyinka Lagu Soo Celinayo Amniga Xisaabteyda Twitter
Tallaabooyinka uu Isticmaalaha Twitter-ka ku raacayo Dib u hel Amniga Koontadaada Twitter: Isla markiiba beddel lambarkaaga sirta ah, ka codso dib u dejinta lambarka sirta ah barta Twitter.
Isticmaaluhu waa inuu hubiyaa inuu cinwaanka emaylka Naso, waad ka beddeli kartaa Twitter-ka iOS ama codsiga Android ama adoo galaya bogga twitter.com; tirtir isku xirnaanta barnaamijyada dhinac saddexaad ee aadan aqoon.
Intaas waxaa sii dheer, Isticmaaluhu waa inuu cusbooneysii furahaaga sirta ah codsiyada-saddexaad ee aad ku kalsoon tahay; tan iyo markii Koontadaada ay la kulantay in si ku meel gaar ah looga xannibo barta Twitter-ka natiijada isku dayga galitaanka ee aan lagu guuleysan.
KA WARBIXO XADGUDUB KU SAABSAN TWITTER
Shabakadda bulshada mararka qaarkood waxaa jira dabeecadaha kuwaas oo ka baxsan Xeerarka iyo Xeerarka Twitter, kuwaas oo noqda kuwo dhib leh oo saameeya wada sheekaysiga muuqaalka leh ee u dhexeeya Twitteros. Dabeecadahaani daruuri kama aha kiisaska xadgudubka.
Haddii Isticmaalaha Twitter-ka uu helo Farriimaha Tooska ah ama Isgaarsiinta xad dhaafka ah ee Xisaabaadka Xadgudubka, waxaad sameyn kartaa waxyaabaha soo socda: Jooji raacitaankeeda oo jooji nooc kasta oo xiriir ah oo lala yeesho Koontada la soo gudbiyey; habkan, ayaa sheegay Account ayaa lumin doonta xiisaha marka aan xisaabta lagu darin gabi ahaanba.
Haddii aragtida ah Xisaab Xadgudub uu sii socdo, Isticmaalaha waxaa loo soo jeediyay inuu Xannibo, sidaasna uga hor istaago inay ku raacaan, ama ku arkaan sawirkaaga Profile-ka boggaaga Profile ama waqtigaaga; habkan, jawaabahaaga ama sheegashadu kama muuqan doonaan tabkaaga ogeysiiska.
Waxaan hanjabaado ka helayaa Twitter-ka
Shabakada bulshada ee Twitter wax yar ayey ka dhacaan wax walba, maxaa yeelay wey isku midoobaan Tirada isticmaalayaasha adduunka oo dhan oo leh dabeecado iyo ficilo kala duwan oo saameyn ku yeelan kara, si togan ama taban, u nuglaanshaha dadka sida caadiga ah ugu sii gudba dhanka Twitter.
Isticmaalaha, haddii uu helay Hanjabaadaha nooc kasta ha noqotee oo aad u aragto in sharaftaada jirka ay khatar ku jirto, waa inaad la xiriirtaa Waaxda Booliska; kiiskan: Diiwaangeli Farriimaha Cayda ama Rabshadaha ah ee aad la soo kulantay intii aad joogtay shabakadda Twitter.
Waa muhiim in Isticmaalaha sahay dhammaan macnaha macquulka ah ee la xiriira tuhmanayaasha suurtagalka ah ee iyaguna muujiyey dabeecad xad-dhaaf ah shabakad kale oo bulsheed; sidoo kale waxay bixisaa macluumaad la xiriira hanjabaado hore oo la helay.
1 Talaabooyinka Lagu Soo Celinayo Amniga Xisaabteyda Twitter
2 KA WARBIXO XADGUDUB KU SAABSAN TWITTER
3 Waxaan hanjabaado ka helayaa Twitter-ka